MomentFeed: Yakawanikwa Local Mobile Kushambadzira Mhinduro dzekutsvaga uye Zvemagariro | Martech Zone
Kana iwe uri mushambadzi paketani yeresitorendi, kana pamusoro pemafranchisees, kana keteni yekutengesa, haugone kushanda pamusika wese nepakati kusimudzira nzvimbo yega yega pasina imwe sisitimu. Chako chiratidzo hachinyatso kuoneka pakutsvaga kwenzvimbo, chisingaone kubatanidzwa kwevatengi vemo, havana maturusi ekugadzira kushambadza kunoenderana nekwako, uye ivo kazhinji havagone kuvepo kwakazara kwenhau.
Sanganisa iko kuyedza pamwe nemamwe makiyi evatengi maitiro ekuchinja:
80% yevatengi vanoda kushambadza kwakagadzirwa kunzvimbo yavo
Iko kune anopfuura 1.7 bhiriyoni anoshanda nhare #social account
90% yevatengi vanoti online ongororo inokanganisa kutenga zvisarudzo
88% yevatengi vanoshandisa nhare yekutsvaga kutsvaga zvigadzirwa zviri padyo nemasevhisi
Ndiyo dutu rakakwana. Unoda kuratidzwa kwedunhu kunoenderana nemutengi wemuno. Kune makuru makuru emaketani emaketani uye emafranchise mabhendi, kurasika mumhedzisiro yekutsvaga mhinduro kwagara kuri dambudziko nekuda kwehuwandu hwenzvimbo nedhata rebhizinesi ravanoda kuchengetedza. Wedzera kune izvi chokwadi chekuti masocial network, senge ratings uye ongororo, ari kukanganisa mhedzisiro yekutsvaga, uye huwandu hweruzivo runoda kuongororwa kune bhizinesi nemazana kana zviuru zvezviwimbo zvinogona kuita kunge zvisingaite.
Kugadzirisa izvi, mabhizimusi mazhinji akakura nemasangano avo enhau, akaita saApplebee, Jamba Juice, uye The Coffee Bean, vatendeukira kuna MomentFeed, kuita kuti zvive nyore kubata uye nekukoshesa kiyi data rezvitoro zvemuno senge makero, maawa ekushanda, ongororo uye mapikicha.
Iyo MomentFeed chikuva inobatanidza nzvimbo dzakasiyana-siyana nevatengi vemuno munharaunda dzavanoshandira, ichibvumira mabhizinesi kuendesa akakodzera, enzvimbo kushambadzira pachiyero kuzviuru yenzvimbo.
MomentFeed Yemunharaunda Yekutengesa Platform
Iyo MomentFeed chikuva ine mhinduro dzekutsvaga nekutsvaga, zvemagariro midhiya, yakabhadharwa midhiya uye ruzivo rwevatengi.
Tsvaga uye Kuwana - MomentFeed inogadzira ese akakosha emuno SEO mabatanidziro ako otomatiki, kuumba nekuchengetedza iyo ecosystem iyo inosimudzira yako yemunharaunda kutsvaga uye inopa kuvimbika kunzvimbo dzako pane ese mapuratifomu.
Paid Midhiya - shandura mushandirapamwe wenyika imwe chete kuita mushandirapamwe wakasarudzika wenzvimbo imwe neimwe zviri nyore nekungobaya mashoma kukubvumidza kuti ushandise zvemukati munzvimbo dzakasiyana dzemagariro.
Social Media Management - mu-app kushambadzira kune chiteshi senge Facebook, Instagram, Mativi mana, Google+ ne Twitter. Kunge mapikicha uye kupindura kune vatengi mune chiyero. Isa zvine simba zvemukati kuti ugadzire kukosha kwenzvimbo uye ugovane zvemukati.
Customer Experience - zviyero zvakaunganidzwa uye ongororo kubva kuFacebook, Mativi mana, Google, uye Yelp zvichibvumira mabrands kuti anyatsoongorora nekupindura vatengi. Vashandisi vanogona kukwevera wongororo kubva kunzvimbo imwe chete, kurongedzwa neyakaenzana nyeredzi, uye kupindura ega kana kune boka revatsinhiri.
MomentFeed yakazivisa kuti iri kuwedzera kugona kwayo seyakagamuchirwa Google Bhizinesi Yangu API Partner. Kubudikidza nekubatana uku, MomentFeed inogona kutobatsira zvirinani nyika zvigadzirwa kuti vavandudze yavo yemuno yekutsvaga mitsva uye neGoogle Ads mishandirapamwe nekubatanidza Google Bhizinesi Rangu zvinyorwa nezviripo geo-optimization kugona.
Google Bhizinesi Yangu (GMB) inobvumidza mabhizinesi kuti agadzire uye agadzirise emahara emabhizinesi akanyorwa pamambure eGoogle, saka vatengi vanogona kuwana nzvimbo dzekuchengetera pavanotsvaga muGoogle Kutsvaga neMepu. Kana zvabatanidzwa neMomentFeed's iripo geo-optimization kugona, vatengi vanogona kuve nechokwadi chakakura, kuenderana uye mamiriro epanzvimbo kune mumwe nemumwe, chitoro chemuno kana, semuenzaniso, vatengi vachitsvaga mazwi senge "kofi," "sangweji shopu" kana "ATM padhuze neni. ”
MomentFeed zvakare iri Instagram Partner, Mativi mana eBhizinesi Partner pamwe nenhengo yeiyo Facebook Kushambadzira Partner (FMP) chirongwa
Tags: cheniFacebookfacebook wongororomativi mana akaenzanamakona mana ongororokodzerogoogle bhizinesi ranguwongororo dzegoogleGoogle +Instagramlocal searchmishandirapamwe yekutsvaga yemunoyemuno seonguvanzvimbo dzakawandamagariro enhau manejimendiTwitterYelpkuongororwa kwenyaya